कास्कीमा पत्रकारमाथि प्रहरी आक्रामक हुनुका रहस्यहरु : ओम हमाल – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ मंसिर १८, बुधबार) १६:३१
सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समर्थक रहेको भन्दै राजनीतिक आस्थाका आधारमा पोखराबाट चार जना पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ।
गिरफ्तार चार मध्ये दुई जना www .janasanchar.com का सम्पादक ओम हमाल र www.rajaneeti.com का सहसम्पादक Aash Kromjee Tamu र sancharkndra.com का पोखरा समाचारदाता Raj Kumar Sugam ghimire र www.ejhajalko.com का सहसम्पादक राजन साउदलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अहिले पनि प्रहरी हिरासतमा राखेको छ।
गिरफ्तार गरिएका अधिकांश पत्रकारलाई अभद्र ब्यबहार गरेको भन्दै सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाइएको छ।
जो पत्रकार हिरासत बसेर अदालतको आदेशले रिहा भएका छन्, तिनलाई प्रहरीले मानसिक र पारिवारिक दबाब दिने गरेको छ। उनीहरुका घर-घर र डेरा कोठामा पुगेर प्रहरीले खानतलासीका नाममा उनीहरुका प्रहरीलाई दुर्वाच्य बोल्ने र बुर्ब्यबहार गर्ने गरेका छन्।
प्रहरीले बिप्लवका सच्चा र कर्मठ कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्न सकिरहेको छैन। पार्टीमा लामो समयदेखि सम्पर्कबिहीन रहेका, निष्क्रिय रहेका तथा पार्टी परित्याग गरी सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गरेका बिप्लवका पुर्व कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर प्रहरीले आफ्नो बहादुरी देखाएको त् छ नै , बिप्लवबिरुद्ध बेस्सरी ठुलो काम गरेको भनेर हौवा पिटिरहेको छ। प्रहरीले यस्ता कार्यकर्ता बाहेक संचार माध्यममा क्रियाशील रहेका पत्रकारहरुलाई निर्दिष्ट गरेर गिरफ्तारीको शृंखला चलाईरहेको छ। जसले गर्दा बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.मा राजनीतिक आस्था राख्ने, बिप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.को समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने र प्रहरी संगठनभित्र रहेका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने पत्रकारहरु अहिले प्रहरीबाट असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन्। उनीहरु पनि खुल्ला रुपमा पत्रकारिता गर्न सक्ने अवस्था अहिले पोखरामा छैन।
पोखरामा मात्र प्रहरी किन पत्रकारलाई टार्गेट गरिरहेको छ ? कि ती पत्रकारहरु राजनीतिक आश्था राख्ने मात्र हैन, बम बिष्फोट गर्ने, आगजनी गर्ने जस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न छन् र हो ? यदि त्यसो हो भने प्रहरी गिरफ्तार गरिएका पत्रकारलाई दशी-प्रमाणसहित तिनै मुद्दा लगाउन किन सकिरहेको छैन ? जे जति पत्रकार गिरफ्तार गरिएका छन् सबैलाई प्रहरीमाथि अभद्र ब्यबहार गरेको भन्दै झुट्ठा सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाइएका छन्। यस्तो अवस्थामा कास्की प्रहरी केही व्यक्ति, पत्रकार र राजनीतिक पार्टीको इशारामा निश्चित पत्रकारहरुप्रति राजनितिक या व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधिरहेको त छैन ? हैन भने कास्कीमा सिमित पत्रकारहरुलाई छानी-छानी किन प्रहरी गिरफ्तार गर्न खोजिरहेको छ ?
कसको इशारा र निर्देशनमा प्रहरी कास्कीमा पत्रकारहरुलाई मात्र गिरफ्तार गर्न जाल बुनिरहेको छ ? पत्रकार पत्रकार न हुन्। उनीहरुको समाचारका लागि चोरसंग सम्पर्क हुन्छ। फताहसंग सम्पर्क हुन्छ। त्यस्तै सज्जन, इमान्दारसंग पनि सम्पर्क हुन्छ। त्यस्तै गरी नेतासंग, हाकिमसँग, मजदुरसंग, उद्योगी ब्यापारॆएसनग सम्पर्क हुन्छ। के सम्पर्ककै भरमा पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्न मिल्छ ? यदि त्यसो हो भने प्रहरीसंग नियमित सम्पर्कमा रही सुचना आदान-प्रदान गर्ने अनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई किन कास्की प्रहरी गिरफ्तार गरेर कानूनी कारवाही गर्दैन ? अनि सम्पर्क भएकै आधारमा पत्रकारलाई गिरफ्तार गरेर दुख दिने, परिवारमा किन आतंक सिर्जना गरिरहेको ?
हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनका दौरान पोखरामा पटक पटक बम बिस्फोट भए, आगजनी भए। एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले यसलाई कदापि सही भन्न सकिन्न। ती बम बिस्फोटमा संलग्न रहेको आरोपमा सत्तारुढ नेकपाकै स्थानीय नेताहरु पक्राउ परे र उनलाई सत्तारुढ नेकपाकै नेताले बुझेर लागे पनि। के सत्तारुढ नेकपाका नेतालाई बम पड्काउने, आगजनी गर्ने जस्ता हिंसात्मक गतिबिधि गर्न छुट छ ? यदि छ भने अरुलाई किन त्यही आरोपमा गिरफ्तार गरेको ? कसैलाई गिरफ्तारी पछि पनि संलग्न हुँदै नभएको अवस्थामा पनि गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लगाउने तर बम बिस्फोटको कार्य लगायतका कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै गिरफ्तार गरी पनि छाडिदिने ? एउतै देशमा एकै प्रकृतिका मुद्दामा दुई थरी कानुन ? के सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता संबिधान र कानूनभन्दा माथि छन् ? के तिनलाई कानुन लाग्दैन ?
कतै यिनै कानूनभन्दा माथि रहेको अनुभूति दिलाउन खोज्ने निश्चित नेता तथा पत्रकारहरु राजनीतिक आस्था राख्ने र प्रहरीका गलत कामकारवाहीको बिरोध गर्ने पत्रकारहरुबिरुद्ध सुराकी त गरिरहेका छैनन् ? यो गम्भीर बिषय हो। के तिनी आजीवन सत्तामा टिकीरहन्छन र ?
(२०७६ मंसिर १८, बुधबार) १६:३१ मा प्रकाशित